नेपाली सेना ६३ सैनिक अधिकृत दीक्षित | Sagarmatha TV
काठमाडौं । नेपाली सेनाको ‘आर्मी कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज’ शिवपुरीबाट स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका ६३ जना सैनिक अधिकृत विद्यार्थीहरु दीक्षित भएका छन् ।
कलेजको २६ औं ब्याचका सैनिक अधिकृत विद्यार्थीहरुलाई मंगलबार दीक्षित गरिएको हो । दीक्षान्त समारोह कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्व विद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. धर्मकान्त बास्कोटाले २१ औं शताब्दीमा आउन सक्ने सुरक्षा चुनौतिको सामना गर्न दीक्षित विद्यार्थीहरु सफल हुने बताए ।
उनले सैनिक क्षेत्रमा धेरै चुनौतिहरु रहेको र त्यसलाई सामना गर्न यस कलेजबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरु सक्षम रहेको विश्वास समेत व्यक्त गरे ।
विश्वमा आउने जस्तोसुकै सुरक्षा चुनौति समाना गर्न सक्ने जनशक्ति तयार गर्न र व्यवसायीकता तथा सैनिक सीप सिकाउन स्टाफ कलेज सँधै अगाडि रहेको समेत बताए ।
कार्यक्रममा प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले दिक्षित विद्यार्थीहरु विश्वले चाहेको आधुनिक सैनिक जनशक्ति बन्न सफल भएको विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले कुनैपनि सैनिक अफिसरका लागि विश्लेषणात्मक क्षमता, योजना र सञ्चार कौशल महत्वपूर्ण हुने भएकाले विद्यार्थीहरु त्यसमा सक्षम हुने बताए ।
नेपाली सैनिकहरु पनि विभिन्न मुलुकमा काम गर्न जाँदा सहयात्रीका रुपमा समन्वय गरेर काम गर्न यसप्रकारको शिक्षा कोषेढुंगा हुने समेत बताए ।
दीक्षान्त समारोहमा ६३ जना विद्यार्थीहरु दीक्षित भएका छन् । जस मध्ये ५० जना नेपाली आर्मीबाट, १ जना राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, १ जना सशस्त्र प्रहरीबाट, १ जना नेपाल प्रहरीबाट र १० जना विभिन्न १० मुलुकका सुरक्षा निकायबाट छन् ।
१० जना विदेशीहरुमध्ये बंगलादेश, चीन, भारत, लेवनान, माल्दिभ्स, नाइजेरिया, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका र अमेरिकाबाट छन् । वि.सं.२०४९ सालमा स्थापना भएको यो कलेजबाट अहिलेसम्म १ हजार ५३ जना दीक्षित भइसकेका छन् ।
जनताका नाममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिले भनिन् – नेपालमा कोरोनाको संक्रमण भयावह छैन
कोरोनाका कारण प्रो लिग फुटबल प्रतियोगिता रद्द
बर्दियाका निर्माण व्यवसायीद्वारा सुरक्षाकर्मीलाई पीपीई प्रदान
मकवानपुरका इट्टाभट्टाबाट कामदार फर्किने क्रम बढ्यो
कास्कीमा नयाँ कोरोना संक्रमण भेटिएको सुचना गलत
आज देशभर ग्याँस वितरण गरिँदै, कहाँ पाइन्छ ? (फाेन नं.सहित)
सार्क राष्ट्रमा कोरोनाभाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्य १ सय नाघ्यो
कोरोनाको जोखिम उच्च भए संगै सोमालियामा अल शबाबको प्रोपागाण्डा
खाडी मुलुकबाट नेपाली फर्काउन सरकार अन्योलमा
कोरोना भाइरसका कारण पाकिस्तानमा हालसम्म ३४ जनाको मृत्यु
कोरोना भाइरसः भारतमा एकैदिन १४ जनाको मृत्यु, ज्यान गुमाउनेको स‌ंख्या ७२ पुग्यो
कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर ५२ हजार १५९ को मृत्यु, १० लाख बढी संक्रमित
कोरोना भाइरसका कारण अमेरिकामा एकैदिन ७८१ जनाको मृत्यु, २९ हजार बढी नयाँ संक्रमित
अत्यावश्यक उद्योग चलाउन दिने सरकारको निर्णय
अर्का एक नेपालीमा पनि देखियो कोरोनाको संक्रमण, संक्रमितको संख्या ६ पुग्यो
साउदीमा कोरोना कहरः मक्का र मदिना क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू
पिट्सबर्ग विश्वविद्यालयले भन्यो- कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपमा सफलता मिल्यो
सिरान टेक्नोलोजीद्वारा समाचार डिलिट गरेको स्वीकार